Tonews:Nigeria Dad ku dhintay qarax ka dhacay – idalenews.com
Tonews:Nigeria Dad ku dhintay qarax ka dhacay
Idalenews:Saddex haween ah ayaa lagu soo warramayaa in weerar is miidaamin ah ay ka fuliyeen waqooyi bari dalka Nigeria, kaas oo galaaftay ugu yaraan 27 qof, sida laga soo xigtay saraakiisha dalkaasi. Tobaneeyo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kaddib markay isku qarxiyeen bannaanka xero qaxooti oo u dhow magaalada Maiguguri ee gobolka Borno, oo ah halka ay aadka ugu badan yihin kooxda Boko Xaraam ee dalka Nigeria ka dagaallanta.
Waxaa aad u kordhayay dagaalka iyo rabshadaha ka dhaca magaaladaasi bilihi u dambeeyay.
Boko Xaraam ayaa dalkaasi ka dagaallameysa tan iyo sanadkii 2009kii, si ay uga hirgeliso dalka shareecada diinta Islaamka.
Baba Kura, wuxuu ka mid yahay ciidamada loo igmaday inay soo afjaraan dagaalka kooxda jihaad doonka ah, waxuuna wakaaladda wararka ee AFP u sheegay maalintii Talaadada in haweeneydii ugu horreysay ay isku qarxisay meel u dhow xerada.
Wuxuu intaasi ku daray in labada dumar ee kalana ay is qarxiyeen waqti dadka ay xirayeen dukaamahooda, halkaas oo uu ka dhashay khasaaraha ugu badan.
Warbixin ay soo sareen baarayaasha Mareykanka ee dembiyada argagixisannimada ayaa lagu sheegay inay tahay kacdoonkii ugu horreeyay taariikhda ee haween badan oo is qarxiya la isticmaalo in ka badan ragga.
Sanadkii hore, dowladda Nigeria ayaa sheegtay in kooxda Boko Haram laga adkaaday.
Balse wararka ayaa sheegaya in ciidanku ay ku guul-darreysteen inay joojiyaan qaraxyada, dadkana ay ka sii qaxayaan guryahooda gobolka Borno oo ay galayaan xeryaha.
Mukhtaar Roobow: Human Rights Watch oo ku baaqday in la baaro dambiyadii uu galay